Search with With ဒုတိယနေရာသည်ပထမအရှုံးသမားသာဖြစ်သည် Martech Zone
စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 7, 2009 စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 7, 2009 Douglas Karr
ဒီတော့…ဒီမှာရာထူးတန်ဖိုးကိုတွက်ချက်နိုင်တဲ့ဥပမာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ San Jose အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအဖြစ်မြင်ယောင်ကြည့်ကြပါစို့၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာဘလော့ဂ်နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုရရှိထားပြီး၊ San Jose အိမ်ရောင်းရန်.
ပြီးခဲ့သည့်လက ၁၃၅၀၀၀ ရှာဖွေမှုရှိခဲ့သည် San Jose အိမ်ရောင်းရန်.
San Jose တွင်အိမ်၏ပျမ်းမျှအိမ်ဈေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၅၄၄၀၀၀ ဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံမြေကော်မရှင်သည် ၃% မွ ၆% အကြားရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ၄% ပျမ်းမျှကော်မရှင်နှုန်းကိုစဉ်းစားကြည့်ကြစို့။
ရှာဖွေကြည့်ရှုသူများ၏ ၀.၁% သာအမှန်တကယ်ရောင်းအားရှိကြောင်းယခုစဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။
SEO သုတေသီအချို့ကစီစဉ်ပေးခဲ့သည် ရာထူးနှင့်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်စာရင်းဇယား, ဒါကြောင့်သင်္ချာကိုလုပ်ပြီးစာမျက်နှာ 8 ရှိရာမှရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိနံပါတ် 1 အထိကော်မရှင်များတွက်ချက်ကြပါစို့။
လက်ရှိတွင် Trulia # 1 အနေအထားရရှိထားသူနှင့် Zillow နံပါတ် ၂ နေရာတွင်ရှိသည် - အမှန်တကယ်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ နံပါတ် ၁ နေရာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားရုံဖြင့် Trulia သည်ရှာဖွေမှုများအတွက် ၅၆ ရာနှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်သည် - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၄၁ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိအိမ်ခြံမြေတစ်မြို့တည်းကိုရှာဖွေသည်။ Zillow သည်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံအောက်သာရှိသည်။ သင်သတင်းစာရသည့်အချိန်တွင်၊ မာကျူရီသတင်းများမင်းကဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံအောက်မှာရှိတယ်။
ဒေသတွင်းရှိအေးဂျင့်များနှင့်ပွဲစားများသည်ဤလမ်းညွှန်များကိုအဘယ်ကြောင့်အနိုင်ယူခွင့်ပြုထားသည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသည် တတျနိုငျသ သူတို့ကိုအားကိုးမည့်အစားယှဉ်ပြိုင်ပါ။ ဒေသတွင်းပွဲစားတစ် ဦး သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသုံးဖြုန်းခြင်းသည်ကျိုးနွံမည်မဟုတ်လော။ ဟုတ်ကဲ့ ... ဟုတ်တယ်။
Trulia သည်ဒီတစ်ခုတည်းသောသော့ချက်စာလုံးဖြင့်အသွားအပြန် ၄ ဆကိုအနိုင်ရနေသည်။ ၄ ကြိမ်! သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကုမ္ပဏီများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကိုအကဲဖြတ်သောအခါ၊ ဤအချက်ကိုမကျော်ဖြတ်ပါနှင့်။ ဤယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များနှင့်ကြီးမားသောရှာဖွေမှုများ၌ယှဉ်ပြိုင်ရန်အလွန်စျေးကြီးလာသည်ကိုသတိရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကသော့ချက်ဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်ယခုအလုပ်လုပ်နေပြီး၎င်းတို့အားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာကိုတွန်းအားပေးနေသည်။ ကျနော်တို့ကအပြည့်အဝပေးချေခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအပိုဆောင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေးဖို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်သူတို့အတွက်နံပါတ် ၁ နေရာရဖို့လိုတယ်။ အဆိုပါလောင်းကြေးကြီးမားဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်အဲဒီမှာရလိမ့်မယ် - ဒါပေမယ့်သူကအားထုတ်မှုတွေအများကြီးယူ။
ကုမ္ပဏီတော်တော်များများဟာပထမစာမျက်နှာမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကြီးမားတဲ့အမှားပဲ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များတွင်သော့ချက်စာလုံးများကိုဖော်ပြရန်မလုံလောက်ပါ။ ထိုရှာဖွေမှုများကိုအနိုင်ရခြင်းသည်စီးပွားရေးနှင့်ထိုရှာဖွေမှုနောက်ကွယ်ရှိဒေါ်လာများကိုရရှိရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏သော့ချက်စာလုံးများ၊ ရင်းနှီးသောအချိုးအစားနှင့်ဝင်ငွေများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အကျိုးအမြတ်ကိုတွက်ချက်ရန်စတင်ပါ။ ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာအတွက်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ အကုန်အကျခံသင့်သည်ကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သင်သတိမထားမိပါကသင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်
Tags: Brian GoffmanEdgeRankဘယ်လို klout တိုင်းတာသည်စကားဝှက်ကိုခှနျအားဗလSocialBroလူမှုရေး
8:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 9, 24
ကောင်းပြီ - မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ၏မဆိုအဆုံးပန်းတိုင်သည်နံပါတ် ၁ သို့ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ငွေအမြောက်အများဘယ်မှာလဲ
9:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 5, 48
နံပါတ် ၁ နဲ့နံပါတ် ၂ အကြားခြားနားချက်ကငါထင်တာထက်အများကြီးပိုကြီးတယ်။
ဤအချက်သည်တစ်သမတ်တည်းဆက်လက်တည်ရှိမည်လား၊ စျေးကွက်အနည်းငယ်ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်နောက်ထပ်တူးကြ ဦး မလား။